ကုလားတွေလည်းဆန္ဒပြနေတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကုလားတွေလည်းဆန္ဒပြနေတယ်
Posted by Phaung Phaung on Jun 5, 2012 in Critic, Members |6comments
အခုလေးတင် (5-6-12) 2း45 pm ဆူးလေဘလီမှာ ကုလားတွေ ဆန္ဒပြနေတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
အင်း…. ဘယ်လိုပြောရမလဲ ( ချောကလက်…ပေါက်ထွက်သွားအောင်…ဘယ်လိုပြောရမလဲ ) အိုအိရှိကြော်ငြာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ဒီဘာသာခြားတွေ အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စက ကြိုးစကိုရှာရင် ရခိုင်မိန်းကလေးကို စော်ကားရာကနေစခဲ့တာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ တခြားဘာသာဝင်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင် ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ( ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးမယ်ဆိုရင် )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူးလေတစ်ဝိုက်မှာတော့ ကုလားတွေကြီးစိုးနေပါတယ်။ စီးပွားရေးကအစ…ဥပမာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတော်တော်များများက (ရှိုင်း construction , Naing Group,Mother Land , Father Land ) ကုလားတွေပါပဲ။ အဲဒီလိုငွေရှင်ကုလားတွေက သူတို့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြီး လူလူချင်းမျိုဖို့ ငွေအင်အားများစွာပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့တွေက ပါဝါပြကြဦးမှာပါ။
ကျွန်မသိရတဲ့ကုလားသူဌေးတွေကတော့ တချို့လည်း မိရိုးဖလာကုလားမို့လို့သာ ကုလားဖြစ်ကြပေမယ့် စိတ်သဘောထားတွေတော့ မဆိုးကြပါဘူး။ အပေါ်ယံပဲသိလို့လားတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးအယူသီးတာကို
မွတ်စလင်ကုလားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မြန်မာအမျိုးသားတစ်ဦးက ဘလက်ကာယလုပ်တယ်ဆိုတာ ရာဇ၀င်မှာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့..၊ ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအသုံးချပြီးလူပါးဝမယ်ဆိုရင်တော့…၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့..
အစ်မ ဖောင်းဖောင်းရေ …. သဂျီးက ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ် …
တောင်ကုတ်မြို့အရေးအခင်းအပါအ၀င်… လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးဆိုင်ရာပို့စ်များကို.. သတင်းအနေနဲ့.. ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတင်တာကလွဲပြီး.. ကိုယ်ပိုင်သဘောထား.. မှတ်ချက်တို့နဲ့..ရေးတင်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ပါ..
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆူပူအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာလျှင် … ရွှေပြည်တော် မျှော်လင့်တိုင်း ဝေးရဦးမယ် ….
ရွှေပြည်တော်က လဲ မမျှော်တော့ပါဘူး အိမ်မှာ သိမ်းထားတဲ့ ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ပဲသွေးတော့မယ် မြို့ထဲမှာ စီးပွားရေး ဘာသာရေး ကအစ ဒင်းတို့ တွေကြီးပဲ ကိုတွေ ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ အမျိုးနဲ့ ဘာသာကို အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်သွားမယ်။ ရွှေပြည်သာတို့ လှိုင်သာယာတို့ လိုအစွန်အဖျားမှာ ကမြန်မာတွေမြိ်ု့လယ်မှာ မွတ်စလင်တွေကြီးစိုးတာ တော့ သည်းခံနေတာ ကြာခဲ့ပြီ။ သူတို့ တွေရဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်တွေ ကြီးစိုးနိုင်မှ ရွှေပြည်တော် ဖြစ်မှာ ဒါမှမဟုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့ လိုချင်နေတဲ့ရွှေပြည်တော် က မြန်မာ က ၁၀% လောက်အကျိုးခံစားရရင် မွတ်စ် တွေ က ၉၀% နှုန်းလောက် အကျိုးခံစား ရလိမ့်မယ်။ ရာဇဝင်မှာ ကုလားနဲ့ ယူတဲ့ ရွှေအိမ်စည်မင်းသမီးနဲ့ အမျိုးတော် ရင်တော့ နာကြပေါ့။
ခက်တာပဲ …. ။ အပြစ်ရှိသူတွေကို အပြစ်ပေးရမယ့် ကိစ္စကို ဘာလို့ လူမျိုးရေးတွေ ၊ ဘာသာရေးတွေ ဆွဲထည့်ချင်တာလဲ …… တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ နောက်ထပ် အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် နောက်ကျချင်ပြန်ပြီလား ။
ဂျမာအသ်ဖြင့် သွားနေသော မွတ်ဆလင် ၈ ဦး အလောင်း ဓါတ်ပုံ http://myanmargazette.net
အဲ့ဒီမှာ အဲ့လိုပြောတယ် ငါကဒီမှာမတွေ့ ဘူး
ပြန်ပီး ချိတ်ဆက်ပေးကြပါအုံး ရွာနဲ့အလှမ်းဝေးနေလို့ပါဗျာ…..